Fahatsiarovana 8 septambra – Tsodrano
Abonnez vous à Tsodrano.com
Exposition 32 Portraits, femmes d’espérance, femmes d’exception
Fahafolo taonan’ny HAVATSA-UPEM sampana Frantsa
Annonces – Evénements – Expositions
Fahatsiarovana 8 septambra
Tonga ny 8 septambra 2011 izay nalaza teo amin’ny tantaran’ny Fiangonana any Madagasikara. (Jereo izay voasoratra ao amin’ny Tsara ho fantatra : 15 septambra 2002 ato amin’ny site)
Fahatsiarovana vitsivitsy no ho zaraina aminao eto. Teo amin’ny tantaran’ny Fifohazana dia nifankahalala i Nenibe Ravelonjanahary, Nenilava Volahavana Germaine, Baba Rajaofera ary Daniel Rakotonzandry izay zandriny indrindra tamin’izy telo mianaka ary maty tanora.
Pasitera Rakotosalama izay zanak’i Baba Rajaofera moa dia nanohy ny asan’ny rainy taty aoriana ary tsy nitsahatra nitarika ny fotoanan’ny 8 septambra rehefa tonga ny fahatsiarovana izany. Raha ny izy dia telo andro no fankalazana izany . Manomboka ny 7 septambra hariva ary mifarana ny 9 septambra. Niezaka nanatrika izany hatrany i Nenibe Ravelonjanahry sy Nenilava.
Noho rizareo tsy avy ao Antananrivo dia misy tokatrano vitsivitsy mandray azy ireo tamin’ny famangiana natao tamin’io fotoana-dehibe io. Tamin’ny taona 1954-1962 dia nandray an’i Nenibe Ravelonjanhary sy Nenilava ny ray amandreninay. Tsy izy mianaka ihany fa ireo olona maromaro niaraka taminy.
Feno hiboka ny trano fa tsy nampaninona loatra. Fa tena faly tokoa izahay . Indrindra moa ny mahita ny akanjon’ireto samy fotsy daholo izay somary nahavariana anay ankizy mpiray-tampo.
Betsaka ny olona te-hihaona tamin’izy mianaka nandritra ny andro nandalovan’izy ireo. Tsy mba nisy naharenesana tabataba na feo mafy fa fahanginana na dia ao aza ny miresaka rehefa ao tokotany. Feo malefaka no re.
Ny fotoana nahazonay fianakaviana niresaka tamindrizareo dia teo amin’ny fisakafoanana maraina, ny atoandro ary ny hariva. Tsikaritro koa fa nisy kivazivazy tsindraindray ary samy nitokelaka nihomehy ny lehibe. Hita eo amin’ny tarehiny avy ny fifaliana. Tao koa ny fanajana izay tena nahavariana ahy satria tsy mipetraka rizareo raha tsy efa tafapetraka ny Papanay. Tsy manaiky mihitsy izy raha tsy izay no vita. Tao amin’ny trano fandraisam-bahiny moa no nitoby. Nesorina ny entana sasany ho any amin’ny garazy mba hahatafiditra ny rehetra. Ary tsihy no novelarina mandritra izany fotoana izany mba hipetrahan’ny rehetra na amin’ny fisakafoanana. Ao koa no handraisin’izy mianaka ny olona te hihaona aminy. Io dia tsy hatrehanay fa zavatra manokana. Saingy misy olona anakiray izay voatendry hiaraka amindrizareo mba hamaky Teny na hanoratra rehefa ilaina izany. Maro tokoa ireo olona miandry ao an-tokotany mba hihaona amin’izy ireo.
Tsy ho hadinoina izy mianaka. I Nenibe Ravelonjanahary moa dia efa lehibe. Efa nanomboka nisoritra teny amin’ny tarehiny sy ny tanany ny fahaterany. Na izany aza dia feno hatsarana sy famiranana. Manao bango ankatoka izy matetika na dia fohy aza ny volony. Na dia somary bongo aza ny masony dia manaitra anao ilay fijeriny. Io angamba no mahatonga ny olona sasany miteny hoe “ handeha hitsaoka fa sao hitany eto ka lazainy an’itsy sy iroa”. Ny tena marina dia ny hoe “ tsy tiako ho lazainy ny zavatra miafina momba ahy”.Mampihomehy io eritreritra io. Inona moa no mampanahy? Somary fofifohy ara-batana izy nefa dia matanjaka. Tiany koa amin’ny maraina ny misotro ronono afangaro amin’ny tamenakatody. Faly ery izy rehefa aroson’ny Mamanay io.
I Nenilava Volahavana Germaine dia mbola tanora tokoa tamin’izany fotoana izany.Tena lava ranjanana. Izy moa dia nanao sara-droa ny amin’ny volony ary natao toko roa teo an-tsofina izany. Efa nahalala izany hoe ‘hygiène alimentaire “ izy mianaka ka nitandrina satria natsiro tokoa moa ny sakafo homen’ny olona ny vahiny izay raisina ao an-tokatrano. Mariky ny fanajana sy fitiavana izany. Tsy ny ray amandreninay ihany fa izay rehetra nandray azy ireo na taiza na taiza. Tiany koa ilay dité naroson’ny Dadanay azy. Tena tia dia tia ny Papanay sy Mamanay rizareo. Nohazavainy fa tsy maintsy mifindrafindra toerana mba hahazon’ny olona hafa mandray azy ireo koa . Ary tsy tokony alahelo satria efa tena feno ny fihaonana sy ny fifaliana. Ampy ny hafatra ho anareo sy ny fifaliana safononoka mandrapody any an-danitra hoy Nenilava. Amin’ny maha ankizy dia izay zavatra hitan’ny maso no tsaroana indrindra. Tamin’ny 1966 no nihaonanay farany tamin’i Nenilava tao Antsakaviro. Niresaka ela dia ela tamin’ny Papanay izy. Tamin’ny atoandro alohan’ny hodiana dia niresaka taminay dimy mianadahy izy. Tenim-pitiavana tsy nisy faneriterena amin’ny fivavahana no renay. Tsaroako amin’ny vavaka ataoko isan’andro ianareo mianakavy kely hoy izy. Ary nojereny naharitra ilay zokikolahy vao nitodika nitsiky taminay izy. Nofihininy tsara ny tananay ankizy tsirairay avy.
Tsara dia tsara ny oditavan-drizareo na dia tsy mitovy aza. Mahavariana koa ny feo na miteny na mihira. Ny tiako indrindra dia rehefa mihira ny “Misaora an’i Zanahary” alohan’ny sakafo maraina ary alohan’ny hatorina. Ny zokiny moa somary mangovitra ny feony, ary ny zandriny somary feo faharoa. Tsy misy teny azo hilazana izay tsapan’ny tena amin’io fotoana io afa tsy ny hoe “fahasambarana tanteraka”. Noho ny maha tompon-trano ny ray amandreninay dia nahazo tombony izahay tamin’izany fihaonana izany. Nafarany tokoa rehefa misakafo mba tsy hisy vary latsaka na dia voan’iray aza . Misy olona eto an-tany tsy manan-kohanina na dia voam-bary iray aza. Mitandrina izany tokoa izahay mandrak’ankehitriny.
Mandritra ny fotoana nandalovan-drizareo tao amin’ny ray amandreninay. Dia misy koa ny fikojakojana hafa. Toa ireo mpanaraka izay manasa ny lamba. Ny tokotany moa dia tena lehibe. Misy laharana dimy nahazona nanaha lamba maro . Fotsifotsy daholo ny lamba, drap, jipo, akajo-ba… Feno ny tokotany. Tsy ho takatry ny sainao ny fifalianay tamin’izany. Vao herin-taona lasa izay dia nahatsiaro sy niresaka izany izahay. Tsy hay hadinona. Ny olona manodidina moa dia gaga . Anefa finaritra izaho sy ny anadahiko lahimatoa mihazakazaka anelanelan’ny lamba. Tsy mifankahita izahay fa mifampiantsoantso amin’ny anarana. Tsy mijanona raha tsy reraka. Avy eo dia mankeny ambaravarakely eny ambony rihina dia manisa ireo lamba mihaha. Tahaka ny ranomasina ny fijery an’ireo ary toa ohatrin’ny onja rehefa tsofin’ny rivotra.
Lavitra tokoa izany fahatsiarovana izany. Nisy teny izay tsy hadinoina ary mampieritritra. Nihanazava kosa taona maro aty aorina.
Rehefa tonga ny 8 septembre dia miomana vao maraina ny handeha hihangona. Mifanesika ny olona alohan’ny fidiran’ny fiangonana na ny firavana na eo am-pisakafoanana na dia hifandray tànana amindrizareo fotsiny aza. Nanomboka tamin’ny 1962 dia nandray anjara ny antoko-pihira tamin’ny fiangonana teny Ambohimanarina nanafana ny fotona.
Samy nandray anjara amin’ny fitorian-teny izy mianaka. Rehefa maty Baba Rajaofera dia ny zanany Rakotosalama no nanohy ny asany. Tiako ilay fotoana malalaka. Satria samy mandray anjara izay te hanao izany. Ary afa-po satria afaka nanatanteraka izany tao anatin’ny fotona fohy.
Matetika taloha no nanontany tena hoe: “ Inona no nahatongavan’ny olona nihaona tamin’ireny olona ireny”. Ny nolazaina taminay fony ankizy dia ny hoe : hidinika sy hitady fampaherezana. Nefa koa dia ao ny miandry fanasitranana indrindra indrindra.
Amin’izao fotoana izao, niova ilay trano fiangonana. Nisy Toby koa izay nahorina. Ny mpamonjy io fotona io mihavitsy.
Na izany aza tsara ny mampita ny tantara amin’ny taranaka aty aoriana na amin’ny teny na amin’ny soratra. Jereo ange ny tantaran’ny hebreo tany Egypta. Tsy nisy nilaza ny tantarany tamin’ny Mpanjaka taty aorinan’i Josefa. Tsy fantany izay nanjo ity firenena ity. Ny hamono sisa no toa an-tsain’ny mpanjaka( Eksodosy 1: 8).
Nanana olona izay nanoro làlana amin’ny fotona voafetra ho amin’ny fivavahana nefa indraindray misy izay toa ohatrin’ny mivavaka amin’izy ireny. Maro ny miady hoe : izahay zanak’i nenilava Volahavana, na zanak’i nenibe Ravelonjanahary. Fa hadino ny hoe “izahay zanak’Andramanitra natsangana noho ny amin’i Jesosy Kristy”
Nisy tenin’izy mianaka raha atambatra dia izao “ raha heverin’ny olona fa hahazona fahefana ny maha-fifohazana ao amin’ny fiangonanana na ny firenena dia diso làlana izy. Ny Fifohazana dia sampana. Ary izay mpino na dia hafa finoana aza na dia tsy tamin’ny alalan’io sampana io dia efa nifoha”.
Misy koa ireo izay mitady mafy ny fanasitranana. Tsy hanomezan-tsiny izany. Ao ny tsy mitsabo tena amin’ny dokotera. Aza hadino fa i Dadatoa Rakotonzandry dia tena tsy salama ary maty tanora. Tsara tokoa raha tianao ny mivavaka nefa ilainao koa ny fanafody ary tsy tokony ho lavinao. Nefa koa misy aretina izay tsy ho sitrana mihitsy. ( Ny fandrarana ny fanafody dia fanoroana voana indrindra amin’izao androntsika izao) .Kanefa na dia ao anatin’ny ady mafy aza dia afaka manana fiadanam-po ary fiadanam-panahy.
Efa hatramin’ny ela no tokony hametra- panontaniana matetika ny amin’ny fivavahana izay arahan’ ny tsirairay. Mba hazava tsara izay tena inoana.
Taloha raha fifohazana ianao dia toa hafahafa tamin’ny kristiana ny mifandray aminao. Amin’izao fotona izao raha tsy fifohazana ianao dia toa hafahafa ihany koa. Koa tsy mazava tsara izany ilay finoana noraisina. Ka mila andalinina. Ny Soratra Masina dia mampiseho ny tantaram-pamonjena ao anatin’ny tantaran’ny firenena maro. Jesosy tsy kristiana akory fa ny fivavahana jiosy no narahiny. Ka aiza ho aiza amin’izany ny fanarahantsika azy.
Sombin-tantara ihany amin’ny tantara niainako ihany no voalazako eto. Fa ny irariko dia izao fahatsiarovana androany izany ho ainga handinihina ny fiainan’ny mpino kristiana sy ny fifandraisany amin’ny Tompo. Sao dia tsy mazava ka io no mampitongilana ny firenena.
Ny « Fomba sy ny fombafomba » ao amin’ny fivavahana kristiana
Andro farany, farandro ? (1)
Partager, share, mizara
Antananarivo, dité, faly, famiranana, fampaherezana, fanajana, firenena, fivavahana, gaga, hatsarana, lahimatoa, matanjaka, maty, misotro, ranomasina, tanora, tantara, tia, voam-bary
Seigneur, aie pitié
Taona 2011 -Septambra
Posts by Julia DARSOT
Tratry ny taona 2021
Ny filazana ny nahaterahan’i Jesosy
Filazantsaran’i Jesosy Kristy
Comments by Julia DARSOT
Clin d'oeil (14)
Soratra Masina (58)
Tsara ho Fantatra (45)
Retrouvez tous nos articles depuis l’année 2002.
Retrouvez tous nos articles depuis l’année 2002. Sélectionner un mois janvier 2021 (1) décembre 2020 (2) novembre 2020 (2) octobre 2020 (1) septembre 2020 (1) août 2020 (1) juin 2020 (2) mai 2020 (2) avril 2020 (2) mars 2020 (2) février 2020 (2) janvier 2020 (2) décembre 2019 (6) novembre 2019 (4) octobre 2019 (2) juin 2019 (2) mai 2019 (1) avril 2019 (6) mars 2019 (1) février 2019 (1) décembre 2018 (5) novembre 2018 (1) août 2018 (2) juillet 2018 (2) mai 2018 (2) avril 2018 (1) mars 2018 (8) février 2018 (2) janvier 2018 (4) décembre 2017 (6) novembre 2017 (1) octobre 2017 (1) septembre 2017 (1) août 2017 (3) juillet 2017 (2) juin 2017 (7) mai 2017 (2) avril 2017 (4) mars 2017 (2) février 2017 (1) janvier 2017 (1) décembre 2016 (2) octobre 2016 (1) juillet 2016 (1) juin 2016 (1) mai 2016 (2) mars 2016 (2) février 2016 (6) janvier 2016 (2) décembre 2015 (5) novembre 2015 (1) octobre 2015 (2) septembre 2015 (2) juillet 2015 (1) avril 2015 (3) février 2015 (3) janvier 2015 (4) décembre 2014 (3) novembre 2014 (4) octobre 2014 (1) août 2014 (1) mai 2014 (1) avril 2014 (6) mars 2014 (3) décembre 2013 (1) novembre 2013 (1) octobre 2013 (2) août 2013 (6) juillet 2013 (3) juin 2013 (3) mai 2013 (2) avril 2013 (1) mars 2013 (6) février 2013 (4) janvier 2013 (2) août 2012 (5) juillet 2012 (5) juin 2012 (3) mai 2012 (3) avril 2012 (7) mars 2012 (3) février 2012 (2) janvier 2012 (3) décembre 2011 (3) novembre 2011 (2) octobre 2011 (5) septembre 2011 (4) août 2011 (1) juillet 2011 (6) juin 2011 (5) mai 2011 (4) avril 2011 (7) mars 2011 (1) février 2011 (1) janvier 2011 (3) décembre 2010 (2) novembre 2010 (1) octobre 2010 (1) septembre 2010 (3) août 2010 (1) juillet 2010 (6) juin 2010 (1) mai 2010 (3) avril 2010 (1) mars 2010 (5) février 2010 (4) janvier 2010 (6) décembre 2009 (2) novembre 2009 (3) octobre 2009 (3) septembre 2009 (1) août 2009 (1) juillet 2009 (1) juin 2009 (2) mai 2009 (5) avril 2009 (10) mars 2009 (4) février 2009 (5) janvier 2009 (7) décembre 2008 (5) novembre 2008 (6) octobre 2008 (3) septembre 2008 (4) août 2008 (4) juin 2008 (1) avril 2008 (1) mars 2008 (1) février 2008 (1) janvier 2008 (2) décembre 2007 (1) novembre 2007 (1) août 2007 (3) juin 2007 (4) mai 2007 (1) avril 2007 (1) mars 2007 (4) février 2007 (4) janvier 2007 (7) décembre 2006 (9) novembre 2006 (4) octobre 2006 (7) septembre 2006 (4) août 2006 (2) juillet 2006 (4) juin 2006 (3) mai 2006 (5) avril 2006 (7) mars 2006 (11) février 2006 (8) janvier 2006 (9) décembre 2005 (10) janvier 2005 (1) septembre 2004 (2) août 2004 (3) juillet 2004 (5) juin 2004 (4) mai 2004 (2) avril 2004 (6) mars 2004 (2) février 2004 (3) janvier 2004 (5) décembre 2003 (4) novembre 2003 (6) octobre 2003 (1) mai 2003 (4) avril 2003 (17) mars 2003 (1) février 2003 (4) décembre 2002 (3) novembre 2002 (1) octobre 2002 (6) septembre 2002 (4)
Tratry ny taona 2021 31/12/2020
Ny filazana ny nahaterahan’i Jesosy 19/12/2020
Filazantsaran’i Jesosy Kristy 07/12/2020
ADVENTO 2020 29/11/2020
156 653 visites
advento ady alina Baiboly batisa fahafatesana fahavalo fahoriana Famelan-keloka famonjena fampijaliana fanahy Fanahy Masina fanantenana fanjakana faty fiadanana fiainana fiangonana fifaliana finoana firenena fitiavana fivavahana harena kolikoly kristiana loza Madagasikara malagasy marina maty mpaminany mpampianatra mpitandrina rano rariny ratsy tantara tany tsara vahoaka vehivavy velona voninahitra
© 2021 Tsodrano. Theme by Anders Norén.